Zvakanakira iyo Wyoming LLC - Mari-Inoshanda Asset Dziviriro
Chengetedza Bhizinesi Rako
Wedzera Bhizinesi Rako
INCORPORATE IZVOZVI LLC Corp
Fona chero nguva 24/7 1-888-444-4812
Wyoming LLC Bhenefiti
Bhizinesi kutanga-up uye wega kuchengetedzwa kwemidziyo masevhisi.
Nei Uchiumba iyo Wyoming LLC?
Iwe une chimwe chinhu icho vamwe vanhu chavanoda kutora kubva kwauri. Uye zviri nyore kuitora kubva kwauri kupfuura zvavari kuti vaende kunze vonoiwana vega.
Pamwe iwe uri muindasitiri yezvivakwa, indasitiri yezvokurapa, muridzi webhizinesi kana mushandi. Zvichida iwe unopa zvidzidzo zvekutasva mabhiza kana kutengesa dzimba kana kuisa pamashiripiti pamabiko ekuzvarwa. Pamwe iwe uri nyanzvi yemakomputa, serial muzvinabhizimusi, kana dhizaini yemukati. Chero chipi zvacho chawakashanda nesimba kuti uwane, kune rimwe gweta kunze uko rinoda kuisa chisvusvuro patafura yake, uyo anoda kuitora kubva kwauri.
Chinhu chekupedzisira chaunoda kunetseka nezvacho paunenge uchishanda nesimba kuita raramo, kuchengeta yako mari yakachengeteka uye kuchengetedza yako pfuma. Asi unofanira kuzvigadzirira ramangwana. Ndipo panogadzira LLC Kutanga. Iyo LLC inhanho yakakosha mukuvaka nekuchengetedza bhizinesi rako. Rini kusarudza nyika iwe unoda iyo mamiriro akanakisa e LLC kuumbwa, mhinduro iri nyore: Wyoming.
Chii chinonzi LLC?
Izwi rekuti "LLC" rinomiririra limited Liability Company. Mubhuku na Nolo, Anthony Mancuso anotsanangura kuti iyo LLC inzira inozivikanwa kune mamwe mashanu echinyakare mabhizimusi mamodheru. Iwo mamodheru anosanganisira wega muridzi, mubatanidzwa, hushoma kudyidzana, C (yakajairika) mubatanidzwa, uye S mubatanidzwa.
Kusiyana nezvimwe zvivakwa zvebhizinesi, iyo LLC ine yakasarudzika musanganiswa wepamutemo uye mutero hunhu. Ndiyo yekutanga bhizinesi modhi iyo inobvumidza wega wega muridzi webhizinesi kuzadzisa zvibodzwa zviviri nekukurumidza uye nenzira kwayo. Kutanga, muridzi anofarira "kupfuura-kuburikidza" kurapwa mutero. Chechipiri, iye kana iye anowana akaganhurirwa ega chikwereti chengetedzo. "Kupfuura-nepakati" kurapwa kwemitero chinhu chinongofarirwa nevaridzi vega kana varidzi vekubatana, nepo kuchengetedzwa kwechikwereti chako pachako kuri chinhu icho varidzi vemakambani vanowanzo batsirwa nacho.
Mumwe-munhu LLC inogamuchirwa zvakakwana. Nepo kuve muridzi weboka iri zvakare sarudzo, iro boka rinofanira kuramba riri diki. Makuru makuru evaridzi anogona kumhanyisa mukuomerwa maererano nekutaurirana pakati pevaridzi uye kusvika mukubvumirana kwakazara. Iyo LLC inoparadzanisa mari mukati meiyo LLC kubva kunhengo dzayo. Nekudaro, varidzi vacho havana mutoro kuzvikwereti zvinochengetedzwa nekambani, kana zvirevo zvinoitwa nemumwe munhu kupokana nazvo. Nhengo dzinogona kupatsanura purofiti uye kurasikirwa asi varidzi vanosarudza. Zvakare, iwe unogona kukamura purofiti kunyangwe nhengo dzichibvuma kuzviita. Iwe haufanire kupatsanura purofiti uye kurasikirwa chete zvichibva pane yakawanda sei iyo LLC nhengo inayo. Nhengo dzinogona zvakare kupa mari, chivakwa, masevhisi kana vimbiso yekuendesa chero cheizvi mukutsinhana zvemari inodiwa mu LLC.
Iyo Wyoming LLC Nzira
Mushure mekunge warema iyo zvayakanakira nezvayakaipira uye ndikafunga kuti kuumba iyo LLC kwakanakira iwe, zvinoita kunge chinhu chine musoro kuita kuita kuseka iyo LLC mune yako imba mamiriro. Ndipo pauri kuitisa bhizinesi rako, handiti? Asi kunze kwekunge iwe uchigara muWyoming kare, unogona kunge uchirasikirwa nezvikomborero zvakakura nekugara pamba. Iwe une zvakawanda zvimwe sarudzo kupfuura yako chete mamiriro epamba - asi chii chinoita kuti Wyoming ive huru?
Muchikamu che Real Estate Kuisa Nhau, sechikamu cheReal Wealth Network, Kathy Fettke akakurukura nyika nhatu dzakakurumbira kune maAdvs: Nevada, Delaware, uye Wyoming. Senyika yekutanga kubvumidza kuumbwa kweV LLC muna 1977, Wyoming yakave nenhoroondo refu nema LLC. Nyanzvi dzichiri kuchikoshesa icho nhasi nekuda kwayo mukurumbira wepamusoro kuvanzika uye nemitengo yakaderera. Mukusarudza LLC Wyoming vs Nevada, Nhengo dzinouya dzinogona kunakidzwa nekuchengetedzeka kukuru uye kusazivikanwa. Nhengo dze LLC uye mamaneja havafanirwe kuziviswa muzvinyorwa zvesangano. Uyezve, kune zvekare sarudzo ye "weupenyu hwese." Proxy yeupenyu hwese inobvumidza iyo nhengo ye LLC kuti ibudise izwi rayo kuburikidza nemumwe munhu ane humbowo hwehukama mune iyo LLC.
Kusarudza Wyoming kuumba yako LLC kwakanaka pachikwama chako futi. Mune chinyorwa che FX Mugwagwa, Michael Atias anoenzanisa fizi pakati penyika dzinonyanya kuzivikanwa kuti dzibatanidze. Kufananidza kunoona kuti ne Wyoming LLC vs Delaware, Wyoming inobhadharisa chete $ 100 yekuumba iyo LLC uye $ 50 yekumutsiridza, nepo Delaware ichibhadharisa $ 90 kuumba uye $ 300 kana zvimwe kuvandudza gore rega. Nevada ine mitengo yakatonyanya kuipa, ichibhadharisa madhora mazana mana nemazana mashanu nemakumi mashanu emari dzehurumende pamwe nemari dzepamutemo uye mari yakanyoreswa yemumiririri yekuumba uye madhora mazana matatu nemakumi matatu nemazana akanyoreswa emumiriri kuti avandudze. Ndiyo imwezve $ 425 kana kupfuura gore rega rega iyo inogona kugara muhomwe yako!
Wyoming LLC Asset Dziviriro kubva kumatare edzimhosva
Imwe yeakasimba maficha eWyoming LLC ndeyekuti inodzivirira sei zvinhu zvako kubva kumatare edzimhosva. Chekutanga pane zvese, ndiyo imwe chete nyika munyika inodzivirira zvinhu zvaunobata mune imwe-nhengo LLC. Ndokunge, ngatiti iwe unobata account yekubhangi kana real estate mune iyo LLC mune chero imwe nyika. Mumwe munhu anokumhan'arira iwe pachako. Iti, iwe unorerekera-kumagumo mumwe munhu mumota yavo. Kubondana kunokuvadza mumwe mutyairi. Ivo vanokumhan'arira kune zvakawanda kupfuura yako inishuwarenzi inovhara. Mumatunhu mazhinji, iwe unofanirwa kuve nenhengo mbiri kana dzinopfuura mune iyo LLC isati yakudzivirira kubva kune mumwe munhu anotora midziyo muI LLC. Iine Wyoming LLC, munhu-munhu LLC inodzivirira zvinhu. Ndokunge, kunyangwe iwe uriwe wega nhengo iyo asset dziviriro zvigadzirwa zvinoramba zviripo.
Iti mhosva yacho inoitika kune rimwe divi reruzhowa. Mumwe munhu anotsvedza uye anowira pachidimbu chezvivakwa zvaunobata muWyoming LLC. I LLC inoshanda sedziviriro, ichichengeta mhosva mukambani. Inogona kuchengetedza yako wega zvinhu kubva pakubatwa. Saka imba yako, mota yako, yako bank account dzakachengeteka kubva kumatare anopesana nekambani. Izvo chete zvinhu zvekambani zviri panjodzi. Sezvineiwo, isu tine mamwe marongero ekudzivirira easset atinogona kushandisa kune ako ega uye bhizinesi zvinhu zvakare. Ingotipa kufona.
Iyo Wyoming LLC ndeimwe yeanoshanda uye anodhura-epamba epamba maturu ekudzivirira maturusi muUnited States. Kune akasimba zvakanyanya matura ekudzivirira maturusi ekumahombekombe senge epasi rese kuchengetedzwa kwemidziyo uye Nevis LLC muCaribbean Asi kune US-based asset dziviriro, iyo Wyoming LLC ndeimwe yeakasimba.
Kumhanya bhizinesi hakungotora nguva yakawanda nesimba - zvinotorawo mari yakawanda. Pamusoro pemutengo wezuva nezuva wekupa chako chigadzirwa kana sevhisi, une mwaka wemutero wekufungawo futi. Kuva usina kugadzirira kana kusakwanisa kubata mwaka wemitero kunogona kukukwazisa iwe nekambani yako. Iwe unofanirwa kugona kuchengeta yakawanda yemari yaunowana sezvinobvira, uye ndipo panowana mabhenefiti e Wyoming LLC mutero anogona kubatsira.
Mune chinyorwa cha NOLO, David M. Steingold anotsanangura iyo LLC yegore kumisikidza zvinodiwa. All LLCs - Wyoming inosanganisirwa - inoda rezinesi mutero, asi kwete ese maAdvs anowana iyo state mutero mabhenefiti ayo Wyoming anoita. Wyoming ndeimwe yemamwe mashoma matunhu asina mari yemunhu kana mubatanidzwa wemari yemutero. Mune mamwe mazwi, izvo zvinoreva kuti unouya mwaka wemitero, zvachose hapana mitero yemitero yenyika inokodzera. Zero. Zilch.
Nekuti hapana wega mutero wemari, maAdvs akaumbwa muWyoming kazhinji haafanire kubhadhara chero nyika mitero pane iyo mari inowana yavo LLC. Iyo chete mutero iyo Wyoming LLCs inoiswa pasi ndeyeiyo yegore rezinesi mutero, inova yakaderera mwero iwe yaunowana munyika. Mari yacho ingave $ 50 kana diki muzana yemutengo wezvinhu zvako LLCs muWyoming.
Zvese izvi zvinoreva kuti unenge uine zvakawanda zvasara muaccount yako pakupera kwegore - mari iyo inogona kuenda mukumhanya uye kukura rako bhizinesi.
Sarudzo Yakanakisa yekutengesa Zvivakwa
Kana zvivakwa iri bhizinesi rako, kusarudza nyika chaiyo yekuisa kambani yako mukati chinhu chakakosha kufunga. Iyo Real Estate Asset Dziviriro Blog inofananidza nyika dzeWyoming, Delaware, neNevada yekubatanidza.
Kana iwe uri kuronga kufirita zvivakwa mune chero nyika, kusarudza a Wyoming LLC yezvivakwa inogona kunge iri sarudzo yako yepamusoro. Kana bhizinesi riine kugara uchisangana nenyika, rinofanirwa kunyoresa kuita iro bhizinesi nenyika iyo bhizinesi iri kuitika. Izvi zvinogona kunge zviri zvemari yekurenda, semuenzaniso. Nekudaro, kupuruzira zvivakwa chiitiko chimwe chete. Iwe unogona kutenga iyo pfuma mune yako Wyoming LLC, flip iyo, uye wobva wanyungudza iyo LLC. Iyi haingave iri sarudzo yakanakisa kana ukaronga kubhenekera akawanda ekuwedzera zvivakwa hazvo, sezvo izvo zvichigona kuverenga sekuenderera chiitiko
Kana iwe watove wakabatanidzwa mune imwe nyika, haina kunonoka kuchinja. Nemutemo weWyoming, pane muitiro wekuenderera mberi uko nyika inogadzira yepamutemo fungidziro yekuti iyo LLC yagara ichichengetwa muWyoming. Yekutanga yekuisirwa zuva rinosara rakasimba kuburikidza neiyi nzira, iyo inobvumidza iwe kuti urambe uchinakidzwa nezvakanaka zveyakagadzwa ine nhoroondo refu. Wyoming zvakare haidi rezinesi rebhizimusi rese uye inodzivirira kusazivikanwa kweayo varidzi ve LLC.
Paunenge iwe waita sarudzo iyo kusanganisa mu Wyoming mukufamba kwakakodzera kwako, iwe unoda kuve nechokwadi chekuti zvaitwa nemazvo. Justia Mutemo weUS inoisa iyo verbiage yese yeiyo Wyoming Limited Liability Company Act, iri iro rakanyanya kuverenga. Sezvo iwe pamwe usina nguva yekuverenga kuburikidza nechinhu chose - une bhizinesi rekumhanyisa, rangarira? - isu tinokubatsira iwe kuti unzwisise zvimwe zvekutanga zve Wyoming LLC mitemo.
An LLC inhengo yakasarudzika nenhengo dzayo, ndipo painopa dziviriro kunhengo. Mumwe kana vanhu vanokwanisa kuzviumba. Iyo inogona kushanda kune chero chinangwa chepamutemo. Mumwe anogona kushandisa bhizinesi kuita purofiti kana kurishandisa sechinhu chisiri purofiti. Iine chinguva chisingaperi. Izvi zvinoreva kuti haina zuva rekupera kana matsva akachengetedzwa kusvika pari zvino. Zita rakanyoreswa kune iyo LLC rakachengeterwa kushandiswa zvega neiyo LLC uye kodzero dzayo zvinodzivirirwa.
Zvinyorwa zvesangano zvinotsanangura zvakadzama zvirevo zvekutanga zvinodiwa kuumba iyo LLC. Izvi zvinofanirwa kuve zvakapetwa nemvumo yakanyorwa yekugadzwa nemumiriri akanyoreswa. I LLC inofungidzirwa kuumbwa kana zvinyorwa zvesangano zvatanga kushanda, kunze kwekunge zuva rakanonoka ratarwa. Chibvumirano chekushanda chinodiwa kuti ubatsire kutungamira mabhizinesi mukati me LLC, uye chibvumirano chinochengetedzwa ne Wyoming Limited Liability Company Act.
Kutora Nhanho Inotevera
Nyika inoda izvo zvaunazvo, asi haufanire kunge uri wega murwendo rwebhizinesi rako. Kana iwe uchida kukwanisa kupa chigadzirwa chako kana sevhisi kwemakore anouya, taura nemumwe wevanopa mazano wezvemari nhasi. Iwe unogona kuwana yako Wyoming LLC kumisikidzwa nhasi kuitira kuti iwe utange kunakidzwa nezvakanaka zvacho mangwana. Nerubatsiro rwedu, iwe unozodzivirirwa uye kugadzirira mari kune chero chinouya munzira yako.
Vimba nevarairidzi vedu vane ruzivo kuti uve nechokwadi chekuti urikuita sarudzo chaiyo kune rako bhizinesi. Ipapo, iwe unogona kutarisa pane izvo zvinonyanya kukosha - musiyano urikuita mupasi.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Chivabvu 27, 2021
Masherufu Makambani uye maAdvs
Veruzhinji Shell Makambani
Cook Islands Vimba
Nevada Asset Dziviriro Trust
Copyright © 1977- Companiesinc.com | All Kodzero dzakachengetedzwa